Iincwadi ezi-5 zoMthetho oYilwayo eziFundiweyo zaza zathandwa ngo-2016 - Ezintsha
Eyona Ezintsha Iincwadi ezi-5 zoMthetho oYilwayo eziFundiweyo zaza zathandwa ngo-2016
Iincwadi ezi-5 zoMthetho oYilwayo eziFundiweyo zaza zathandwa ngo-2016
Uluhlu igubungela umxube we-eclectic wezihloko-ukusuka kwizihlangu ze-tennis ukuya kwi-genomics ukuya kubunkokeli obuhle.
BONA KWAKHO: Iincwadi ezili-10 zeBhili yeeGates zithi ziya kukwenza ulumke
Zonke zibhalwe kakuhle kakhulu, kwaye zonke zandiwisa emngxunyeni womvundla wokuqonda okungalindelekanga kunye nolonwabo, wabhala.
Nazi ezine zakhe eziphezulu, kunye negama elinye elibekekileyo: Ithiyori yomtya.IAmazon
Ithiyori yomtya NguDavid Foster Wallace
Ubhala athi, Le ncwadi ayinanto yakwenza ne-physics, kodwa isihloko sayo siza kukwenza ubonakale ukhaliphile kakhulu ukuba uyifunda kuloliwe okanye kwinqwelomoya. Ithiyori yomtya yingqokelela yezincoko ezintlanu ezibalaseleyo zikaWallace kwitenesi, umdlalo endiwunikileyo ngeentsuku zam zeMicrosoft kwaye ndiphinda ndiyilandela inkanuko. Awunyanzelekanga ukuba udlale okanye ubukele nentenetya ukuthanda le ncwadi. Umbhali ongasekhoyo wayesebenzisa usiba ngobuchule njengoRoger Federer ephethe irakethi yentenetya. Apha, njengakwiminye imisebenzi yakhe eqaqambileyo, uWallace wafumana iindlela ezijikajika ingqondo zokugoba ulwimi njengecephe lesinyithi. Inja yezihlangu.IAmazon
Inja yezihlangu nguPhil Knight
Ubhala athi, Le memoir, yomsunguli we-Nike, sisikhumbuzo esinyanisekileyo esihlaziyayo sokuba indlela eya kwimpumelelo yeshishini ibukeka njani: iyamdaka, iyingozi kwaye igcwele iimpazamo. Ndidibene no Knight amatyeli ambalwa kule minyaka idlulileyo. Ulunge kakhulu, kodwa naye uthule kwaye kunzima ukumazi. Apha uK Knight evula ngendlela i-CEO ezimbalwa ekulungeleyo ukuyenza. Andiqondi ukuba uKnight uzimisele ukufundisa umfundi nantoni na. Endaweni yoko ufeza into ebhetele. Ubalisa ibali lakhe ngokunyaniseka kangangoko anakho. Yintsomi emangalisayo.
IGene nguSiddhartha Mukherjee
Uyabhala, Oogqirha bathathwa njengesoyikiso 'esiphindwe kathathu' xa bekhathalela abaguli, bafundisa abafundi bezonyango kwaye benza uphando. UMukherjee, owenza zonke ezi zinto kwiYunivesithi yaseColumbia, 'sisisongelo esiphindwe kane,' kuba ukwangumbhali oPhumeleleyo wamaBhaso ePulitzer. Kwincwadi yakhe yamva nje, u-Mukherjee usikhokela kwixa elidlulileyo, langoku, nakwikamva lesayensi ye-genome, egxile ikakhulu kwimibuzo yokuziphatha okuhle ethi iveliswe ziitekhnoloji ze-genome zakutshanje kunye nezona zibalaseleyo. U-Mukherjee ubhalele le ncwadi eyenzelwe abaphulaphuli, kuba uyazi ukuba iitekhnoloji ezintsha ze-genome zikwincopho yokusichaphazela sonke ngeendlela ezinzulu.
Intsomi yeNkokeli eNamandla.IAmazon
Intsomi yeNkokeli eNamandla ngu-Archie Brown
Ubhala athi, Idabi lonyulo olunobuzaza lwalo nyaka lindishukumisele ukuba ndithathe le ncwadi ka-2014, ngumfundi wase-Oxford University ofunde ubunkokheli kwezopolitiko-obulungileyo, obubi nobubi-ngaphezulu kweminyaka engama-50. UBrown ubonakalisa ukuba iinkokheli ezenza igalelo elikhulu kwimbali nakubuntu ngokubanzi ayizizo ezo sibona ukuba 'ziinkokheli ezomeleleyo.' Endaweni yoko, bathanda ukuba ngabo basebenzisanayo, bathumele, kwaye bathethathethane-kwaye baqonde ukuba akukho mntu unakho okanye kufuneka ube nazo zonke iimpendulo. UBrown ngekhe aqikelele ukuba incwadi yakhe iya kuba njani ngo-2016.
Khankanya ngokuhloniphekileyo: Igridi.IAmazon
Igridi Ngu-Gretchen Bakke
Ubhala athi, Le ncwadi, ethetha ngombane wethu osele ugugile, ingena kolunye lweentlobo endizithandayo: 'Iincwadi ezimalunga neMundane Stuff ezithi zibangele umdla.' wayebhala isoftware yequmrhu elilawula igridi yamandla eMntla ntshona. Kodwa nokuba awuzange unike mzuzu ingcinga yokuba umbane ufikelela njani kwiindawo zakho zentengiso, ndicinga ukuba le ncwadi ingakuqinisekisa ukuba igridi yombane yenye yezona zinto zibalaseleyo zobunjineli kwilizwe langoku. Ndicinga ukuba nawe uza kuza ukubona ukuba kutheni le mihla igridi inzima kwaye ibaluleke kakhulu ekwakheni ikamva lamandla acocekileyo.
Kupholile kakhulu ukuba iSikolo sizise i-Korea Skincare Stateside
Usapho lwasebukhosini lurhoxisa ukutshintsha komsitho woonogada ngenxa yeCoronavirus
U-Amy Poehler Uthengwe nje uya kuba ngu-Arnett ngaphandle kweNdlu yabo
IAmazon inokuba ihlawula ngaphezulu kwi-MGM, kodwa ngaba ibalulekile?
kutheni abantu bathanda ukuhamba nabafileyo
Imiboniso bhanyabhanya emitsha iza kungekudala
ungajola njani nomfana oyisitabane
Iplanethi efana nomhlaba yafunyanwa ngo-2015
dr. UJohn layke ugqirha wezonyango uqokelele iqela lotyando lweentaba